Soomaali iyo ajaanib lugu qabtay qaad iyadoo soo gelinaya dalka Noorweey | Somaliska
Dalka Noorweey ayaa waxaa ciidanka ilaalada ka qabta ay soo qabteen soomaali iyo ajaanib kale xilli ay dalkaasi qaad ku soo daabulayeen. Hadal qoraal ah oo ay saarteen ayey ku sheegeen inay qabteen qaad lugu qiyaasay culeeskiisa 111.7 kiilo.
Qoraalka ayaa sidoo kale lugu sheegay in dadkii qaadkaasi soo galinayey gacanta lugu dhigay kuwaas oo ahaa afar qof oo labbo kamid ahi yihiin. Dhinaca kale haweeneey soomaalida Iswiidhan ka mid ah ayaa ka mid aheyd dadkii gacanta lugu soo dhigay xilli ay qaadka soo galinayeen. Haweeneydan ayaa la sheegay ineey kursi kuwa dadka cuuryaaminta loogu talagalay ku fadhisay, waxaana ay ku rarneyd qaad miisaankiisa dhan yahay 39.4. Ajaanibta kale ee lala qabtay soomaalidan ayaa u kala dhashay dalalka Hooland iyo Laatfiya.
Kooxdan ayaa waxaa gacanta ku haya oo lugu wareejiyey booliska, mana ahan markii ugu horeeysay ee la soo qabto soomaali qaad ku raran, dhawaan ayey aheyd markii gacanta lugu soo dhigay nin soomalai ah oo isagana qaad dalkaasi gelinayey. Ciidanka ilaalada xuduudaha dalkaasi ayaa haatan labbo jibaarantay qaadka laga qabti xuduudaha dalkaasi. Mana ahan markii ugu horeeysay ee qaad lugu qabto soomaalida dalkaasi.
Ilhaam Cabdalla: Gabar gabdhaha ku dhiiragelisa ineey ciyaaraan kubadda cagta